Raw Testosterone decanoate powder (5721-91-5) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Anabolics Steroids / Testosterone powder Series / Testosterone decanoate powder
MUTSVENE unofanirwa nekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hweTesttosterone decanoate powder (5721-91-5), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Testosterone decanoate powder zvinhu Characters
Testosterone decanoate powder kushandiswa mu steroid cycle
Testosterone decanoate powder kazhinji inonzi Neotest 250.
2. Testosterone decanoate powder (CAS 5721-91-5) Kushandisa:
Testosterone decanoate powder doses ye 200-250mg nevhiki ichave yakazara zvikuru.
Warning on Testosterone decanoate powder
Pane zvinokonzerwa nemigumisiro yeTesttosterone decanoate powder, asi hormone ye testosterone inowanzove yemhomoni inoremekedzwa zvakanyanya kune varume vakuru vane utano hwakanaka. Murume akwegura ane hutano haana kubvisa nyaya yakaderera ye testosterone, sezvo ichange iine rutivi rwakasvikisana nehukama pano zvakare.
Nokuda kwevarwere vemu testosterone, zvinetso hazvishamisi sezvaunenge uchangobva kuchinja pane izvo muviri wako unoshaiwa. Izvozvo zvinokonzerwa neTesttosterone decanoate powder zvicharamba zvichigoneka asi zvinogona kuwedzera ne supraphysiological doses. Zvisinei, varume vakawanda vanogona kutsungirira mazinga epamusoro e testosterone zvakanaka.
Testosterone decanoate poda yakasvibiswa ndiyo inowanzobatanidza zita rechiratidzo kuTesttosterone decanoate yaiitwa poda yakasikwa. Iyi inopikisa testosterone hormone yakabatanidzwa kune yakakura / yakareba Decanoate ester. Iyo ester pachayo haipindi maitiro emabasa uye maitiro; hapana ester ine simba iri. Zvisinei, iyo yakanyorerwa Decanoate ester inokanganisa nguva yekubudisa testosterone. Izvi zvichange zvishoma nezvishoma kuita testosterone, uye ichapa kusununguka, kusingagumi kwemahomoni mushure mekunge mujekiti imwe chete.
Testosterone decanoate poda yakashata (CAS 5721-91-5)
Kutenga sei Testosterone decanoate powder (CAS 5721-91-5) kubva kuAASraw
AAS Raw inopa kuchena 99% Testosterone inogadzirisa poda yakasvibirira kuti vashandise muviri kana kuti pasi pasi mabhii ekushandisa mujenisi.
Testosterone decanoate mbiriso yakakosha Recipes
Rated 2.75 kubva 5